thinzar's blog: Penang Trip - 1
Raya Haji ပိတ်ရက်သုံးရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပီနန်ကို သုံးရက်၂ည ခရီး သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပီနန်သွားဖို့စီစဉ်တာ သုံးလေးခါလောက်ရှိပြီ။ နီးမှ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်သွားတာချည်း။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကြိုမစီစဉ်ထားဘဲ တစ်ပါတ်လောက်အလိုမှ သွားကြရအောင်ဆိုပြီး ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် ကောက်ဝယ်၊ ဟိုတယ်ဘွခ်လုပ်မှဘဲ သွားဖြစ်တော့တယ်။
ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ကို ticket4u.com.my ကနေ ဝယ်လိုက်တယ်။ ကေအယ်လ်ပီနန် အသွားအပြန် တစ်ယောက်ကို ရင်းဂစ် ၇၀ ကျော်ကျော်ဘဲ ကျတယ်။ ဟိုတယ်ကို booking.com ကနေ book လုပ်တယ်။ လေးယောက်ခန်း ၂ညကို ၂၉၆ ရင်းဂစ်။ အဲဒီထက် စျေးသက်သာတဲ့ ဟိုတယ်တွေ၊ ဒီစျေးနဲ့ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဟိုတယ်တွေ ရှိပေမယ့် ဒီတစ်ခုက သွားရလာရ အချက်အချာ တော်တော်ကျလို့ New Asia Heritage Hotel ကိုဘဲ ရွေးလိုက်တယ်။
တစ်ယောက်မှ ပီနန်မရောက်ဖူးတော့ မသွားခင် ကြိုပြီး ဘယ်သွားမယ်၊ ဘာစားမယ်၊ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင် အိမ်စာလုပ်ရတယ်။ ပထမဆုံး ကိုတီဇက်အေရဲ့ Penang Trip အပိုင်း ၈ပိုင်း ကို ကျေညက်အောင် အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ဖတ်တယ်။ :D Google Maps ကနေ နေရာတွေ၊ လမ်းတွေကို သေသေချာချာ လေ့လာမှတ်သားတယ်။ ဘလော့တွေ လိုက်ရှာဖတ်တယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်တယ်။
ပထမဆုံး ပြဿနာက သွားမယ့် ဘတ်စ်ကားဂိတ်။ အသိတွေကို မေးတယ်။ ဂူဂယ်လ်မှာရှာတယ်။ ဘယ်သူမှ နေရာအတိအကျ မညွန်းပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီနေ့မှ ကြည့်ကြပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးထားလိုက်တာ ဘတ်စ်ကား မလွတ်သွားတာဘဲ ကံကောင်း။ တစ်ခြားဘတ်စ်ကားတွေအကုန်က အဓိက Terminal တွေဖြစ်တဲ့ Puduraya, Pekeliling Express Bus Terminal, TBS ကနေ ထွက်ပေမယ့် Plusliner နဲ့ Nice ကုမ္ပဏီ ၂ခုက KTM old railway station ကနေ စီးရတယ်။ Pasar Seni LRT station ကနေ တံတားကို ဖြတ်လိုက်ရင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ ရှာရလွယ်မှာပါ ထင်ထားတာ။ တကယ်သွားမယ့်မနက်ကြမှ ဒုက္ခလှလှတွေ့ရော။ ဟိုလူမေး ဒီလူမေးနဲ့။ တံတားဖြတ်လိုက်ရင် ရောက်တယ်ဆိုပေမယ့် တံတားလည်းဖြတ်ပြီးရော ဆင်းဖို့ လှေကားက အများကြီး ဘယ်ကဆင်းရမှန်းမသိ၊ ထပ်မေးရပြန်ရော။ ၁၀နာရီ ဘတ်စ်ကားထွက်မှာ ဂိတ်ကို ၁၀မိနစ်နောက်ကျမှ ရောက်သွားတယ်။ ဘတ်စ်ကားဆရာက ကားတောင်စက်နှိုးနေပြီ။ မနည်းလိုက်တားပြီး အနောက်က လိုက်လာတဲ့ မရွှေချော သုံးယောက်ကို စောင့်ရတယ်။ အရင်ခေါက် စင်ကာပူသွားတုန်းက ငါးမိနစ်လေးနောက်ကျတာကို ဘတ်စ်ကားတစ်ခေါက် လွတ်သွားဖူးတော့ တော်တော်ကြောက်နေတာ။ ကားပေါ်ရောက်မှဘဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။
လက်မှတ်ဝယ်ထားတုန်းက ခုံက အနောက်နားမှာပေမယ့် နောက်ကျမှရောက်သွားပြီး လူတွေက ထိုင်ချင်သလိုထိုင်နေကြတော့ လွတ်တဲ့ခုံ ဝင်ထိုင်လိုက်ရတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ double-decker bus ရဲ့ အပေါ်ထပ် ရှေ့ဆုံးခုံမှာရတယ်။ မလေးရှားမှာက မြန်မာပြည်လောက် သစ်ပင်မခုတ်တော့ တစ်လမ်းလုံး တောတွေ တောင်တွေက စိမ်းစိမ်းလန်းလန်း ရှိသေးတယ်။ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွေနားမှာတော့ တောင်တွေ ဖြိုထားတယ်။
လမ်းမှာ အစားအသောက် ဝယ်လို့ရမယ်ထင်ပြီး မနက်က ဘာမှ မစားခဲ့တာ မှားသွားတယ်။ ကားရပ်နားစခန်း သေးသေးတစ်ခုမှာ မိနစ် ၂၀လောက်ဘဲ ရပ်ပေးတယ်။ ဗိုက်ကတော့ တော်တော့်ကို ဆာနေပေမယ့် စားစရာကလည်း အသီးအနှံတစ်မျိုးဘဲရောင်းတော့ ရှိတာလေး ဝယ်စားပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ရတယ်။ မနက်၁၀နာရီလောက် ကေအယ်လ်က ထွက်ခဲ့တာ နေ့လည် ၂နာရီခွဲလောက်မှာ ပီနန်ကျွန်းက Sg. Nibong Bus Terminal ကို ရောက်တယ်။ မြို့ထဲသွားမယ့်ဘတ်စ်တွေ ဒီ terminal ထဲထိ ဝင်ရပ်ပေးတယ်။ တည်းမယ့်ဟိုတယ်က Georgetown က Komtar နားမှာ။ တက္ကစီတွေက ရင်းဂစ်၂၀တောင်းတယ်။ ဘတ်စ်ကားနဲ့ဆိုရင် ၁ကျပ်ပြားလေးဆယ်။ မိနစ်၂၀လောက်နဲ့ Komtar ကိုရောက်တယ်။ ရောက်တာနဲ့ ဟိုတယ် check-in မလုပ်ခင် 1st Avenue Mall ထဲဝင်ပြီး နေ့လည်စာ အရင်စားရတယ်။
ပီနန်ကျွန်းက တော်တော်လေးကို tourist-friendly ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးဂိုက်တွေဘာတွေမလိုဘဲ ဒီတိုင်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်။ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း အချိန်မှန်မှန်ဆွဲတယ်။ တက္ကစီတောင် သိပ်စီးဖို့ မလိုဘူး။ ၂ညအိပ် သုံးရက်အတွင်း ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေကတော့
- Fort Cornwillis ခံတပ်, Penang Esplanade, Penang City Hall
- Gurney Drive ဟော်ကာစင်တာ
- ပီနန်တောင်, Kek Lok Si ဘုရားကျောင်း
- Batu Ferringi ကမ်းခြေ၊ ညစျေး
- Koo Kongsi Festival of lights
- Penang Toy Museum
- Heritage walk around the town
- A search for Penang street arts
ဖြည်းဖြည်းချင်း အသေးစိတ် ရေးသွားပါမယ်။ :)
English လို စကားလံုးေတြက
ဖတ္ရတာ အဆင္မေၿပဘူး ၿဖစ္ေနပါတယ္ . း))
လင့္ခ္ ခ်ိတ္ထားေပးတာေရာ.. စာလုံးေတြ ထပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းေျပာျပတာေရာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကြန္ပ်ူတာကေနဘဲ ၾကည့္ျဖစ္ေတာ့ မသိလိုက္တာ။ ေသခ်ာျပန္ျပီး စမ္းၾကည့္လိုက္ပါမယ္ :)
6/11/12 4:56 PM